auxiliaries nke plastic ọkpọkọ n'ichepụta ọkachamara
19 afọ nọgidere na-emepe emepe nke ahụmahụ na belling ụlọ ọrụ.
Eriri Cutting Machine
Igwe eji eme ihe
Mbụ na klas technology na ihe karịrị afọ 15 na-enwe maka machineries. Nye ngwọta maka customizing ahaziri machineries professionally.
Na mbara nzukọ oru otu nke rite ụlọ ọrụ na ọkachamara ude. Na a ọkachamara ahịa otu na-enwe kwa afọ mmepụta bụ karịrị 200 tent.
Na tupu-sales alo na n'ikuku. Nye elu mmepụta akara usoro zuru okè mgbe-sales ọrụ usoro.
Jiangsu Yuyu Plastic Machinery Co., Ltd. · Changzhou Desheng akpụzi Factory bụ ọkachamara emeputa amị nile di iche iche nke auxiliaries igwe nke plastic ọkpọkọ kemgbe 2000. Ọ na-ekpuchi ebe ndị 50000 sq.m. na emi odude ke Danyang City, Jiangsu Province, nso Shanghai City.
Anyị isi nwetara na-agụnye: nile di iche iche nke ịkwanyere anwụrụ, ịkwanyere corrugated ọjà, eyi ọjà, Pee anwụrụ nke belling / socketing igwe, slotting igwe, na eri ọnwụ igwe, ekwe igwe na laser marking igwe. The ọkpọkọ n'obosara nso si kacha nta 16mm ka kacha 1600mm.
The ụlọ ọrụ slogan na-ewepụtara n'ichepụta belling igwe enweghị Jizọs na-ezipụ. Anyị uche anya nnyocha na mmepe ọhụrụ nke belling igwe nke nkwa ruru eru na ozugbo ahịa ọrụ.
kasị mma n'ihi na ị
RBM250-NI igwe na-ere ahịa
DS323-HT HYDRO TESTER igwe
RBM800-AS igwe na - ere ihe
RBM710-AS igwe na-ere ihe
RBM250-AS igwe na-ere ihe
DS1200 igwe na-ere ihe
Ngwa igwe na-edina DS1000
Uru nke monomer (EPDM) roba
Dị ka a ụlọ ọrụ na 19 afọ ahụmahụ, anyị ga na-arụ ọrụ ike na-enye gị a na nso nke scaffolding ngwọta.
Mba 88 Chenyang Road, Hexi Industrial Area, Huangtang Town, Danyang City, 212327, Jiangsu Province, China.
Belling Machine , Igwe eji eriri ọkpọ, Single Head Chamfering Machine , Belling Machine ,